အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ ချစ်ညီမလေး နဒီရွှေရည် – Ever Best
အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ ချစ်ညီမလေး နဒီရွှေရည်
ကိုယ်အောင်မြင်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခု ကို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေ ကို လက်တွဲခေါ်ချင် တဲ့ စိတ်လေးတွေ ဖြစ်တတ်သလို ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ လည်း သူမရဲ့ချစ်ညီမလေး နဒီရွှေရည် နဲ့အတူ ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်သလို အတူတူ Live လွှင့်ပြီး ညီမလေး ကိုပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပေးခဲ့ ပါ တယ်..။ ညီမလေး ကလည်း မမနဲ့ အတူ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ လုပ်ရတော့ ပျော်မဆုံး ပါ ပဲ..။
ကစ်ကစ်နဲ့ကေးကေး ဆိုတဲ့ ညီမနှစ်ယောက် ကို ပရိသတ်တွေ ကချစ်ခင်အားပေးကြပြီး ကေးကေး ရဲ့ ချစ်စရာသားလေး ဟာလည်း သူမတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ အသည်းကျော်လေး ဖြစ်သ လို ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေး လည်းဖြစ်နေခဲ့ ပါ တယ်..။ အိမ်ရဲ့ဆည်းလည်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ ကေးကေးဟာ ကိုယ်ပိုင် မိသားစုဘဝလေးမှာ လည်း အေးချမ်းပျော်ရွှင် ရသူပါ..။
ညီမနှစ်ယောက်အတူ Live လွှင့်ခဲ့ တဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံလေးတွေ ကို ” မနေ့ညက ကစ်နဲ့ ကေးလေး Live လေးကို ကြည့်လိုက်ရရဲ့လား??? မနေ့က Give Away ရ လိုက်တဲ့သူတွေ လည်း အရမ်းပျော်မယ် လို့ထင်ပါ တယ် ကစ်ကတော့ ကစ်ချစ် ရတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောရင်း လက်ဆောင်တွေ ပေးရတာမို့ အရမ်းပျော် ” ဆိုပြီး ကစ် က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ဝေမျှခဲ့ပါ တယ်…။
ကိုယ္ေအာင္ျမင္လာတဲ့အေနအထားတစ္ခု ကို ကိုယ္ခ်စ္ရတဲ့သူေတြ ကို လက္တြဲေခၚခ်င္ တဲ့ စိတ္ေလးေတြ ျဖစ္တတ္သလို ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ဟာ လည္း သူမရဲ့ခ်စ္ညီမေလး နဒီေရႊရည္ နဲ႔အတူ ေၾကာ္ျငာေလးေတြ ရိုက္သလို အတူတူ Live လႊင့္ၿပီး ညီမေလး ကိုပရိသတ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ ပါ တယ္..။ ညီမေလး ကလည္း မမနဲ႔ အတူ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ လုပ္ရေတာ့ ေပ်ာ္မဆုံး ပါ ပဲ..။
ကစ္ကစ္နဲ႔ေကးေကး ဆိုတဲ့ ညီမႏွစ္ေယာက္ ကို ပရိသတ္ေတြ ကခ်စ္ခင္အားေပးၾကၿပီး ေကးေကး ရဲ့ ခ်စ္စရာသားေလး ဟာလည္း သူမတို႔မိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ့ အသည္းေက်ာ္ေလး ျဖစ္သ လို ပရိသတ္ေတြရဲ့အခ်စ္ေတာ္ေလး လည္းျဖစ္ေနခဲ့ ပါ တယ္..။ အိမ္ရဲ့ဆည္းလည္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထား တဲ့ ေကးေကးဟာ ကိုယ္ပိုင္ မိသားစုဘဝေလးမွာ လည္း ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ရသူပါ..။
ညီမႏွစ္ေယာက္အတူ Live လႊင့္ခဲ့ တဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ပုံေလးေတြ ကို ” မေန႔ညက ကစ္နဲ႔ ေကးေလး Live ေလးကို ၾကည့္လိုက္ရရဲ့လား??? မေန႔က Give Away ရ လိုက္တဲ့သူေတြ လည္း အရမ္းေပ်ာ္မယ္ လို႔ထင္ပါ တယ္ ကစ္ကေတာ့ ကစ္ခ်စ္ ရတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီး နဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားေျပာရင္း လက္ေဆာင္ေတြ ေပးရတာမို႔ အရမ္းေပ်ာ္ ” ဆိုၿပီး ကစ္ က သူမရဲ့လူမႈကြန္ရက္မွာ ေဝမၽွခဲ့ပါ တယ္…။
Next post ရင်ခုန်သံတွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားလောက်အောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံစံလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ ရုပ်သံ ဗီဒီယို